Resettlement of “Bengalis” so called Rohingyas,against the will of the ethnic Rakhine people can lead to another round of conflict | democracy for burma
Resettlement of “Bengalis” so called Rohingyas,against the will of the ethnic Rakhine people can lead to another round of conflict
tags: ANOTHER CONFLICT, Arakan, Bengali, Burma, Myanmar, Rakhine State, Rakhine Straight View, resettlement, RSV, so-called Rohingyas
RAKHINE STRAIGHR VIEW-RSV : ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မောင်တောမြို့နယ်တွင် ခရိုင်အဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများ တာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေ
ဖမ်းသင့်သည်များမဖမ်း၊ ပေးသင့်သော လိုင်စင်များကိုမပေး၊ ရခိုင်တိုင်းရင်း သား များကို အိမ်ဆောက်ပေးရာတွင် ငွေကျပ် ၃၅ သိန်းတန် အိမ်သည် ပြန် လည် စိစစ်ကြည့်လျင် ၁၇ သိန်းမျှသာကုန်ကျပြီး ကျန်ငွေများကို စည်ပင်အိတ် ထဲ ထည့်လိုက်သည့်ကိစ္စ၊ အခြားသော ကိစ္စများစွာ ရှိသေးကြောင်းသိရသည်။
ရခိုင်ရွာ မီးရှို့သော ဘင်္ဂလီများအား ယခုအခါတွင် နေရပ်ပြန်ရောက်ပြီဖြစ်သည့် တိုင် ဖမ်းဆိးခြင်းမရှိခြင်းများလည်း ရှိပါသေးသည်။
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများအားမီးရှို့ခဲ့သူများ အား ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် စာရင်းပြထားသော်လည်း ယခုအခါတွင် ထိုသူများ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုသူတို့အားဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသေးဘဲ လွှတ်ပေး ထားကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ ထွက်ပေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သူများ စာရင်းကို RSV မှ ယခင်လည်း ဖော်ပြခဲ့ ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
RSV MONDAY 17.12.2012
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို နေ့စဉ်ဖမ်းဆီးနေသော်လည်း မောင်တောမြို့နယ်မီး ရှို့ တွင်ပါဝင်ခဲ့သူများကို ယနေ့တိုင်ဖမ်းဆီးမှုမရှိသေးသည်မှာဘာကြောင့်လဲ
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ရွာပေါင်း ၁၂ ရွာကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခဲ့သူများကို ယနေ့တိုင် ဖမ်းဆီးခြင်းမရှိသေးသည်မှာ ဘာကြောင့်ဖြစ် သ နည်း ဆိုသည့် အကြောင်းကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေကြောင်းနှင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဒုတိယအကျော့ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ရာနှင့်ချီပြီ့း ဖမ်းဆီးထားခြင်းများ ရှိနေကြောင်းလည်းသိရသည်။
ယင်းကိစ္စအပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းမေးမြန်းသွားရန် ရှိ ကြောင်းလည်းသိရသည်။
အလားတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့အပြားမှ ရခိုင်တိုင်းရင်း သား များအားနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးလျက်ရှိပြီး စစ်တွေ အမှတ်(၁) ရဲစခန်းတွင် ဖမ်း ဆီးခံထားရ သူ ၁၂ ဦးခန့်နှင့်အခြားရဲစခန်းများတွင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ အားလုံးပေါင်း ၁၀၀ ၀န်ကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအားလုံးက ကန့်ကွက်လျက်ရှီ ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။
RAKHINE STRAIGHT VIEW -RSV
A network of Rakhine social groups have warned that the resettlement of “Bengalis” against the will of the ethnic Rakhine people can lead to another round of conflict in the western Rakhine state.
A platform of various social groups from 18 townships in Rakhine State, Rakhine Social Network (RSN) also cautioned the authorities concerned that attempts to solve the conflict “by showing disregard to wishes of the local nationals” would not beacorrect one.
The warnings came inastatement issued following the RSN formation throughatwo-day social network conference ataBuddhist monastery in Taungup, which ended on December 16. The conference was organised to facilitate social and economic progress for the Rakhine people.
During the conference, the participants said the recent riots in the Rakhine state stemmed from territorial disputes between Rakhine locals and “Bengali trespassers”.
The statement also said RSN would keep an eye on UN agencies, NGOs and international NGOs to see whether their activities weaken the Rakhine nationals by empowering the Bengalis.
Denouncing recent government crackdown on the Latpadaungtaung copper mine protesters, the RSN asked the government to release correct data on exploration of natural resources in Rakhine state.
The resources should be tapped only if the locals give their consent, it said.
← HAPPY BIRTHDAY KO KO GYI-88 GENERATION STUDENT LEADER -18.12.
US Ambassador Derek Mitchell visit Kachin Refugee camp →